Korea Atsimo: Misedra Fanakianana Mahery Vaika ny Fiara Natokana Ho An’ny Vehivavy Any Anaty Metro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2011 11:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, македонски, русский, Português, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Ny metro no fitaovan-pifamoivoizana haingana indrindra, azo antoka sy mety tsara mba hialàna amin'ny fitohanana eny an'arabe ao Séoul, renivohitr'i Korea Atsimo. Miaraka amin'ny fiakaran'ny fanavakavahana ny lahy sy ny vavy any anaty metro, indrindra indrindra fa mandritra ny ora mahabe ny mpivezivezy sy rehefa alim-be, dia nanapa-kevitra ireo manampahefana ao an-tanànan'i Séoul ny hametraka fiaran-dalamby natokana fotsiny ho an'ny andriambavilanitra mba hampiatoana io fiakaran'ny fanavakavahana eo amin'ny lahy sy vavy io, fihetsika izay niteraka fanehoan-kevitra nafampàna tokoa teo anivon'ny aterineto.
Nanambàra ny tanànan'i Seoul tamin'ny 20 Jolay 2011 fa hametraka fiaran-dalamby natao manokana ho an'ny andriambavilanitra ao amin'ny metro Zotra faha 2 manomboka amin'ny Septambra. Raha tsara ny tamberina avy amin'ny mponina, dia ho haparitaky ao amin'ny tanàna ilay tetikasa.
Araka ny tatitra iray avy ao an-toerana avy amin'ny polisin'ny metro [ko], herisetra ara-nofo 550 no naharaisana tatitra nandritra ny volana dimy voalohany tamin'ity 2011 ity, izay maneho fiakarana 22 isan-jato raha mitaha amin'ny tamin'ny taona lasa. Tatitra iray hafa avy ao an-toerana no namoaka [ko] fa nahatratra 1.192 ny isan'ireo mpanolana tamin'ny 2010.
Ny ahiahin'ireo mponin'ny aterineto
Fiaran-dalamby amin'ny metro, Seoul, Korea Atsimo. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr Matthew R Lloyd (CC BY-NC-ND 2.0).
Ny ankabeazan'ireo mponin'ny aterineto, misalasala ny amin'ny mety ho fahombiazan'ilay hevitra, dia nanohitra mafy ilay rafitra vaovao. Seo Yong-hwan (@a2n5) izay mitantana fivarotana kirarom-behivavy aty anaty aterineto dia nandefa bitsika hoe [ko]:
Isaky ny mandray metro aho, ezahako foana ny hietry ho faran'izay tsotra sy mitandrina mba tsy horaisina hoe manao faneriterena ara-nofo. Tena mifanohitra amin'ny fanavakavahana izany. Mandritra ny fivezivezena ao anatin'ny ora maha-betsaka ny mpandeha, (ilokako) tsy maintsy ho betsaka ny vehivavy tonga dia hisafidy izay fiara akaiky indrindra ny toeram-pifindràny, toy izay handeha hamonjy ny fiara natao fotsiny ho an'ny vehivavy.
Kang Hyun-ju (@nymphtintin), vehivavy mpianatry ny Anjerimanontolo, dia nibitsika hoe [ko]:
Tsy mety kosa ilay fiara anaty metro natokana ho an'ny vehivavy fotsiny. Na ireo efa misy, toy ny ‘seza ho an'ny osa, ny antitra, ny kilemaina sy ny vehivavy bevohoka’ aza zara raha misy asany.
Tsy vao voalohany izao ny hevitra hametrahana fiara natokana ho an'ny vehivavy any anaty metro no nandramana mivantana teo amin'ny fiainana andavanandro. Tamin'ny 1992, rafitra mitovitovy amin'izay no efa nampiharina tao amin'ny Zotra 1, saingy tsy ela dia nadaboka rehefa tsy noraharahain'ny olona ilay fepetra. Rehefa ireo mpianatra na mpiasa rempotra no miala any, ny zava-dehibe indrindra aminy dia ny hoe tafiditra amin'ny metro tokony handehanany, fa tsy ny hifidy izay fiara sahaza any akory.
Ao anatin'ilay seha-pifanakalozan-dresaka Daum Agora, isan'ny tena be mpampiasa indrindra, nanoratra ilay mpampiasa aterineto, RaphyRyu [ko] fa sarotra ny hampiasa ny fanavakavahana ho fanalahidin'ny herisetra ara-nofo:
Ny tanjoma amin'ilay hoe fiara natokana ho an'ny vehivavy any anaty metro dia ny mba hiarovana ireo vehivavy amin'ny herisetra ara-nofo. Raha tena mihevitra marina ny hisoroka ny heloka atao amin'ny vehivavy ry zareo, tokony ho ny fitandroana ny fahalemana any anaty metro no hamafisina ary ampiharina ny lalàna velona ampiarahana aminà sazy henjana, fa tsy hoe avahana aminà toerana iray mihidy ny vehivavy. Io rafitra vaovao io dia tahaka ny hoe ‘fisorohana ny heloka avy any ifotony’ raha atao indray mipi-maso, nefa raha ny marina, tsy hafa fa ‘fandosirana ny olana’ ihany satria tsy hain-dry zareo ny misahana azy. Saino ny mifanohitra amin'izay; vehivavy mandray fiara toy ny mahazatra ihany na mandray metro ary amin'ny ora tsy misy ilay fiara natokana ho an'ny vehivavy na iray aza. ( Rehefa misy zava-manjo ireo vehivavy ireo amin'ny tranga tahaka ireny,) tsy misy mpiarao ry zareo.
Betsaka amin'ireo mpampiasa aterineto, toa an'i Min-goon, no nampahatsiahy [ko] ny hafa ny tsy fetezan-javatra tamin'ny metro tamin'ny taona 1997 rehefa napetraka ilay fiara natokana ho an'ny vehivavy, avy eo nadaboka nialàna fotsiny tamin'izao.
Zareo Lehilahy, tena manana fironana hanao heloka ara-nofo?
Mpampiasa aterineto i Green note izay milaza ny tenany ho mpianatra eny amin'ny Lisea ary 20 taona mandray ny metro saika ho isanandro mihitsy, nanoratra izy[ko]:
Mivoaka ny trano aho ary mandray fiara fitaterana ho any Jamsil, toerana fandraisana metro, ary mahita vahoaka be mitsangana eo. Rehefa misy laharana be eo miandry metro, hoy aho any an-tsaiko any hoe “Androamanitra o. Tena ho dia tsy hahazoana aina ity niany”, satria tsy maintsy hitranga ny fifampikasohana tsy iniana mandritra ny dia. […] Ny hevitra amin'ilay fiara atokana ho an'ny vehivavy milaza hoe ny fahitan-dry zareo ny lehilahy tsirairay dia ‘tena mety’ ho mpanolana avokoa.
Ny ankabeazan'ireo valinteny ao amin'ny aterineto momba ilay rafitra vaovao dia miiba avokoa. Na izany aza, misy ampahan'olona vitsy ihany miaro ilay rafitra. Nibitsika i [ko] Dong-hyun (@Beautiful_KWON) :
[Ny lafy manohana] ny tohan-kevitra dia ‘Hevero ny amin'ireo olona ao anatin'ny fianakavianao na ny sipakelin'ingahy’. Tena henjana ity an. Izaho hifidy an'io.
Nisy fifidianana taty anaty aterineto teo aloha teo [ko] izay natao herinandro maro nialoha ny fanapahan-kevitry ny tanàna, naneho marina fa tany ampiandohana ireo Korea Tatsimo mpampiasa aterineto dia nitia ilay hevitra satria hiteraka vokatsoa ho an'ny andaniny sy ny ankilany io: hahatsiaro tena ho tsara aro ny vehivavy, raha ho afaka amin'ny hevitra tsy mifankahazo tsy misy ilàna noho ny kisendrasendran'ny fifanosehana any anaty metro manao fatra-tsaonjo kosa ny lehilahy.
Sarikely mampiseho fiaran'ny metro ao Seoul, avy amin'i hojusaram, mpampiasa Flickr (CC BY-SA 2.0).